Gụọ nri m ma nweta ọnwa 12 nke Bochum Weebụ Na-akwụghị ụgwọ | Martech Zone
Naanị ịchọrọ ịnye gị niile isi! Lọ ọrụ ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ na-enye ọnwa 12 nke nnabata n'efu mgbe ị debanyere aha. Enyi m, Amol Dalvi bụ nke mbụ na-anwale nkwekọrịta. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị na-erite uru nke nkwekọrịta ahụ m ga-ejide n'aka na ịde blọgụ gbasara gị iji nyere aka bulie ọkwa gị.
Ahọrọ m onye ọbịa m mgbe m tosịrị otu afọ si nọrọ n'ụlọ m nwee ọbịa. M na-anagide downtime, egwu nkwado, ngwa ngwa upgrades, ọrụ… ruo mgbe m gara Jumpline. Achọtara m Jumpline site na ịme igwu ala Netcraft ebe m nyochaa ndị agha na ọnụego ntụgharị dị ala. Ọ na-ewute na Jumpline enweghị mgba okpuru ma nwee ụfọdụ oge kachasị mma na ịntanetị.
M kpaliri saịtị m niile (ihe dị ka 25) gaa na Jumpline ma nwee obi ụtọ kemgbe ahụ. Ha na-agba ọsọ kachasị ọhụrụ na nke kachasị ukwuu site na adaba VDS. Ọ bụrụ n’ịchọrọ MySQL, pịa pịa tinye ya. Chọrọ PHP? Otu ihe. Nke a bụ ngwugwu kachasị maka teknụzụ nke ụjọ nke mumbo-jumbo niile na-akwado. Ha bụ ụdị ndị ọbịa ị debanyere aha wee chefuo na ị gaghị echegbu onwe gị.
Iji nweta uru nke onyinye ahụ, kwụa ụgwọ ndepụta m ị ga-ahụ ọkọlọtọ mgbasa ozi n’okpuru ọkwa ọ bụla. Onyinye a ga-abụ maka izu 2 na-esote maka ndị na-agụ akwụkwọ m. Jiri ya rite uru! Enweghị ihe jikọrọ!
M ga-achọ ịkele ekele ọzọ maka ịkwado Jumpline m izu ole na ole gara aga. Vingkwaga m WordPress blog gaa na onye ọbịa ọhụrụ ahụ bụ ikuku na njikwa njikwa njikwa Jumpline na-eme ka ọ dị mfe ịhazi ihe dịka MySQL, adreesị email, wdg.
M na-ahọrọ akara ngosi nkwado ha na-enyekwa. Enwere m ihe nkesa Apache nke m ugbu a, yabụ enweghị nzuzu na-akụghasị ihe nkesa Apache kesara dị ka m nwere na onye ochie m host
Enweela m blọọgụ m na Jumpline maka izu ole na ole ugbu a, ọ dị mma.
Jisie na nkwalite a.
Daalụ, Dean! Agaghị m edebe aha m n’azụ ụlọ ọrụ belụsọ na a) M ji ha ma b) m tụkwasịrị ha obi. Enweela m Jumpline n'oge gara aga nye ndị na - agụ akwụkwọ m mana ọ naghị eme ihe ike a. Agụwo m ịgụ ọtụtụ akụkọ egwu n'oge na-adịghị anya, nkwado na-adịghị mma, na nnukwu peeve - ụdị ochie nke ngwanrọ!
Otu n'ime plugins m dere edepụtara m nwetara TONS nke nzaghachi na ọ mebiri ma ọ naghị arụ ọrụ - mgbe ihe niile ọ bụ bụ ụdị ochie nke PHP ma ọ bụ nsụgharị ndị na-enweghị ọbá akwụkwọ ndị nkịtị na-ebu ma ọ bụ na-arụ ọrụ.
Ya mere - Ekpebiri m itinye ego m n'ọnụ m. Ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ, amaara m na m ga-anụ maka ya!
Hmm na-ada ụda na-adọrọ mmasị. Ana m atụ anya ịgbanwe onye na-elekọta m ugbu a yana ihe dị mma karịa okwu ọnụ sitere n'aka ọkachamara teknụzụ. Echere m na imma jiri uru a.
Mee 24, 2008 na 11: 09 AM
Gbalịa free-whd.com, Ọ bụ ezigbo ndekọ ntanetị weebụ. Ekwenyesiri m ike na ị ga-ahụ websaịtị nnabata n'efu ị na-achọ.